तपाईको पिसाबको रङ्गले बताउँछ, तपाईलाई के भइरहेको छ ? | Suvadin !
तपाईको पिसाबको रङ्गले बताउँछ, तपाईलाई के भइरहेको छ ?
Apr 15, 2019 15:31
राम्रैसँग थाहा छ कि हामीले पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ, तर पनि अनेक कुरामा अल्झेर हामी पानी पिउनुलाई हाम्रो दैनिकीको प्राथमिकतामा पार्न असफल हुन्छौं । यसको परिणाम हामी आफ्नो शरीरमा विभिन्न परिवर्तन आइरहेको अनुभव गर्न थाल्छौं ।
काठमाडाैं, बैशाख २ - शरिरको कुनै भागमा देखिएको केहि फरक चित्रले शरिरमा भएको परिवर्तनको संकेत गर्छ । जस्तै पिसाबको रंग विचार गर्नुहोस् । पिसाबको रंग शरिरको अवस्था अनुसार फरक फरक हुन्छ । यसैले, बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने पिसाबको रंगले शरिरमा भएको परिवर्तनलाई संकेत गर्छ ।
यो लेखमा पिसाबको रंगले शरिरमा भएको कस्तो परिवर्तन अथवा रोगको संकेत गर्छ भन्नेकुरा शुभिदनमार्फत जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
के तपाईले ऐसेलु वा काफल खानु भएको थियो रु होइन भने, तपाईको पिसाबमा रगत आएको हुन सक्छ वा यसले मृगौलाको समस्यालाई संकेत गरेको हुन सक्छ । त्यसैले तुरुन्तै अस्पताल गइ चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् ।